Ph.D. (Management) - YEC Education
MBA ဘွဲ့နဲ့ပဲ ရပ်နေတော့မှာလား? PhD (Management) Why PhD (Management) ? PhD (Management) Program သည် ပါရဂူဘွဲ့ဖြစ်ပြီး၊ မိမိကိုယ်ကို Intellectually challenge လုပ်လို သူများ၊ Management Consulting ကို လုပ်ကိုင်ရာတွင် PhD or Doctor အဖြစ်ဖြစ်လိုသူများနှင့် တက္ကသိုလ်များတွင် Professor အဖြစ် Career တည်ဆောက်ရန် ရည်မှန်းချက်ရှိသူများအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ PhD တက်မယ်ဆိုရင် စဉ်းစားသင့်သည့် အချက်များ သုံးနှစ်အချိန်ပေးနိုင်မလားဆိုတာ စဉ်းစားရပါမည်။ နောက်ပြီး Research အတွက် data စုဆောင်းရမည်၊ Analyze လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ Y.E.C Learning Center Y.E.C Learning Center ရဲ့ Mission သည်လူတိုင်းဘဝကို ပညာရေးဖြင့်မြင့်တင်ဖို့ အစဉ်တစိုက်လုပ်ဆောင်သွားဖို့ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သည်မှာ ပညာရေးကို အဟိတ်အဟန်ထက် အစစ်အမှန်ပညာရေးသည်ပိုအရေးကြီးပါသည်။ ပညာသင်တဲ့အခါမှာ သင်ကြားသည့်ဆရာကောင်းရမည်၊ ပညာရေးကိုချီးမြင့်သည့်အဖွဲ့အစည်းခိုင်မာမှုရှိရမည်။ ပညာကိုအမှန်တကယ်နားလည်တက်ကျွမ်းသွားရမည်။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း 2015 တွင် Working Professional များအတွက် Weekends မှာသာ ဖွင့်လှစ်သည့် Diploma များသင်တန်းများ မန္တလေးမှာ တက်ရောက်ဖို့အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ထို့ကြောင့် Y.E.C Learning Center ကို 1 June 2015 တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး စီမံခန့်ခွဲမှု ဘာသာရပ်များကို Working Professional များအတွက် စတင်ပို့ချခဲ့ပါသည်။
Diploma in Business Administration ဘာသာရပ်ကို မြန်မာပြည်မှာ အောင်ချက်အများဆုံးနှင့် ဂုဏ်ထူးအများဆုံးထွက်အောင် သင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့သော center လည်းဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင် City of Oxford College (UK) နှင့် Lincoln University College (Malaysia) တို့နှင့် Learning Partner အဖြစ်ရှိနေပါသည်။ May5ရက်နေ့မှာ PhD Program နှင့် MBA Program ကို မဟာ Mandalay မှာပို့ချဖို့ Y.E.C Learning Center ၏ Founder & MD ဖြစ်သူ Dr. Phyo Paing နှင့် Malaysia အခြေစိုက် မလေးရှား နိုင်ငံ၏ အဆင့်မြင့် ပညာရေး၀န်ကြီးဌာနမှပေးအပ်ချီးမြှင့်ထားသော “5-Star 2017” Excellent Award ရ Lincoln University College ၏ Dr. Amiya Bhaumik (CEO & Vice-Chancellor) တို့ MOU လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။
Why Lincoln PhD?
Lincoln University College သည် KPT (Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, Ministry of Higher Education Malaysia) နှင့် MQR (Malaysian Qualifications Register)/ MQA (Malaysian Qualifications Agency).မှ အသိအမှတ်ပြုထားသော ကျောင်းဖြစ်သည်။ Times Higher Education (THE) World University Impact Ranking အရ 2019 တွင် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ် (301-350) ပါဝင်ပြီး မလေးရှားနိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ် (9)ခုစာရင်းတွင်ပါဝင်ထားသည့် တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ပြီး မိမိ၏ဘွဲ့လက်မှတ် စစ်/မစစ်ကို Verify လုပ်ရန်အတွက် Link နှင့် Cert No. ပါ ဘွဲ့လက်မှတ်တွင် ပါရှိထားခြင်း၊ Lincoln University College (LUC) ဟု အတိုကောက်ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီး Malaysia တွင် Campus နှစ်ခုဖြင့် ဆေးတက္ကသိုလ် နှင့် Medical Science အပြင် Business Management ဘာသာရပ်များကို ပို့ချလျက်ရှိပါသည်။ World Health Organization (WHO) တွင် registration လုပ်ထားခြင်း၊ International Association Universities (IAU) အဖွဲ့ဝင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ခြင်းနှင့် Association of Commonwealth Universities (ACU) အဖွဲ့ဝင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ခြင်းသည် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သည့်အချက်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော်တွင်ကျောင်းခွဲများဖွင့်လှစ်ထားပြီး ယခု PhD Program သည် မလေးရှားအစိုးရ Malaysia National Accreditation Board ၏ Malaysian Qualifications Agency (MQA) မှ အသိမှတ်ပြုထားသည့် Program တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
MBA or Master degree related to Management
စတင်မည့်နေ့ – Jan 3
Coursework အနေနဲ့ သင်ကြားရမည့် ဘာသာရပ် နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Research Methodology & Computer Application Application ရယ် သင်တန်းတက်ရမယ်။
Every Saturday 9:00 AM to 12:00 PM
PhD Thesis လုပ်ရန်ကာလ3to5Years
Research Proposal ကို စစ်ရမယ်။
Malaysia ကို Title Defense သွားရမယ်။
Supervisor & Malaysia မှ Co-supervisor နဲ့ Thesis လုပ်ရမယ်။
Viva Thesis လုပ်ရမယ်။
International Conference ၂ ခါ တက်ရမယ်။ ကိုယ်ရဲ့ Article လေးခု International Journal မှာ publish လုပ်ရမယ်။ တစ်ဆောက်ကို $250-$2500 အတွင်းကျနိုင်တယ်။
သုံးနှစ်ခန့်မှန်းကြာမယ်။ Research ပေါ်မူတည်ပြီး ကြာမြင့်ချိန်ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။
(အစိုးရဝန်ထမ်း အထက်အရာရှိများအတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလအတွင်း မလေးရှားသို့ Title Defense မသွားရောက်နိုင်ပါက အထူးစီစဉ်ထားပေးသည့် အစီအစဉ်တစ်ခုရှိပါသည်။)
PrevPreviousDiploma in Business & Management
NextMaster of Business Administration (MBA)Next